Ximan Iyo Xeeb Oo Kujirta Qaban Qaabadii Ugu Dambeysay ee Shirka Cadaado Iyo Halka Ay Marayso | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ximan Iyo Xeeb Oo Kujirta Qaban Qaabadii Ugu Dambeysay ee Shirka Cadaado Iyo Halka Ay Marayso
Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa faah faahin ka bixiyay qaban qaabo xoogan oo loogu diyaar garoobayo shirka dhawaan ka dhici doona degmada Cadaado, kaasi oo la doonayo in maamul loogu sameeyo gobalada Mudug iyo Gal-gaduud.
Careys Maxamed Xaaji oo ah afhayeenka maamulkaasi ayaa waxa uu sheegay in hadda ay marayaan marxaladii ugu dambeysay ee diyaar garowga.
“Gobalada Mudug iyo gal-gaduud waa deegaan aad iyo aad u ballaaran, ergo badan ayaa ku sugan magaalada Cadaado, waxaan rajeynaynaa kuwo kale oo intaan ka badan inay yimaadaan, maalmihii lasoo dhaafay waxaa degmada Cadaado tagayay Seddax illaa iyo Afar Diyaaradood” ayuu yiri Afhayeenka Ximan Iyo Xeeb.
Dhinaca kale Afhayeen Carays ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay kulamo gaar gaar ah oo magaaladaasi ka soconaya, kuwaasi oo uu ku sheegay in ay wada yeelanayaan ergada iyo sidoo kale xubno kale oo halkaasi ku sugan si looga sii tashto shirka furmi doona.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku tagay degmada Dhuusa Mareeb waxa uu sheegay in 1-da bisha soo socoto degmada Cadaado lagu qaban doono shirka maamul u sameynta gobalada Mudug iyo Gal-gaduud.